Ikhaya STARS E-EUROPE U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Emer". Indaba yethu ye-Emerson Palmieri Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angakhulumi ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesitayela sakhe sokudlala kodwa bambalwa abheka i-Bio yethu yakwa-Emerson Palmieri okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Emerson Palmieri dos Santos, owaziwa njengo-Emerson Palmieri noma umane u-Emerson wazalwa ngo-3rd August 1994 eSantos, eSão Paulo, eBrazil. Wazalwa nomama wakhe wase-Italy, u-Eliana Palmieri nobaba waseBrazil, uReginaldo Alves dos Santos.
U-Emerson unogogo lwase-Italy ohlangothini lukakanina futhi ube yisakhamuzi saseNtaliyane kusukela ngo-March 2017. Wakhula nomfowabo omdala, Giovanni, ngubani futhi ongumdlali webhola lezinyawo odlala emuva. U-Emerson ube ngumthandi webhola laseNgilandi kusukela eneminyaka engu-15 ubudala.
Wenze i-Santo yakhe yokuqala ngeSantos eneminyaka engu-16 ngemuva kokuphuma ohlelweni lwentsha kanye no-18 ukuthi wayezenzele njengomdlali eqenjini lokuqala, ngenxa yokuthi uyakhula ezingeni eliphakeme kunazo zonke ebhola lebhola lebhola. Ama-scouts aqala ukumbhikisha njengo-sharks kusukela ngemuva kokuwina i-2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior ngohlangothi lwe-Santos U20. KwakunguPalermo scouts ekugcineni okwenze ukuba ahambe eYurophu. Ukuzikhethela kwakhe ohlangothini lwase-Italy kwavela ngenxa yomama wakhe ovela ezweni. U-Emerson wasebenzisa lelo thuba ukuze asondelane nakakhulu nomndeni wakhe.
I-club yase-Italy uPalermo, owambolekisa ngenkathi ye-2014 / 15 ngenketho yokuthenga. Ngeshwa, amathuba akhe okukhanya ayembalwa futhi aphakathi kakhulu nangemva kwalokho enza ukubonakala okuyisishiyagalolunye nje iqembu alizange licabange ukhetho lokwenza lo msebenzi ube unomphela.
Ukulahleka kukaPalermo kwakungenzuzo yamaRom njengoba bethatha lo-21 oneminyaka engu-ubudala ngokubolekisa isizini se-2015 / 16. Wasebenzisa isikhathi sakhe sokuqala e-Stadio Olimpico njengengqondo eqenjini likaLucas Digne, kodwa wabonisa isithembiso esanele sokuthi imali yakhe yokubolekwa kwemali ekhokhelwa isikhathi esithile. Kwakuyilapho Okufanayo Antonio Conte U-Chelsea wangena. Bonke abanye, njengoba bekusho, manje umlando.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Kulula kakhulu ukuthandana futhi ubanjwe esivunguvungu senjabulo yokuhlela impilo 'ndawonye kuze kube phakade'. Yilokho okwenzeka ku-Emerson Palmieri oye waba nesithandwa sakhe somntwana, Isadora Nascimento kusukela bobabili basebasha.
U-Emerson wahlangana nentombi yakhe yesikhathi eside i-Isadora Nascimento eBrazil, futhi laba bobabili bebelokhu bekanye ndawonye kusukela ngaleso sikhathi. Abadlali bebhola bebhola kuthola kulula kakhulu ukubona uLatina ovuthayo, owavuma ukuthi ukhuluma ngokukhululekile u-Emerson ukudlala.
Ngaphambili wathi: "Uma ngiya emidlalweni, nginamandla kakhulu, nginamahloni, ngibonga uthando lwami. Ngangihlale ngithanda ibhola kodwa hhayi kakhulu ukubuka. "
U-Emerson, onamalunga abalandeli baka-200,000 Instagram futhi uthumela njalo izithombe zothando lomphefumulo wakhe obonakala ethanda kakhulu futhi eziqhenya ngempumelelo yakhe.
U-Isadora uke waphawula ngesithombe sika-Emerson esithi: "Uthandane kakhulu, uyathandeka kakhulu. Uhlale ekhuluma izinto ezinhle kimi, okwenza umangaze angikholelwa ukuthi kungenzeka, futhi ungiphatha kahle kakhulu. Uhloniphe mina nomndeni wami. Ngizokuthanda njalo, Emerson! "
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
U-Emerson Palmieri unemfanelo elandelayo kubuntu bakhe.
Amandla ka-Emerson Palmieri: Uhlakaniphile, unothando, unomusa, unomoya ofudumele futhi ujabule.
Ubuthakathaka buka-Emerson Palmieri: Wayengaba nokuzikhukhumeza, enenkani, ezizimele, ezivilaphayo futhi ezingapheliyo.
Okuthandwa ngu-Emerson Palmieri: Okokuqala, uthanda ubuhlobo bakhe no-Isadora. U-Emer uyayithanda futhi indawo yakhe yokudlala, ethatha amaholidi, ukuthenga izinto ezibiza kakhulu ze-Isadora, imibala ekhanyayo nokuzijabulisa nabangani.
Okuthandwa ngu-Emerson Palmieri: Ukunakwa, ukubhekene nobunzima obungokoqobo nokungaphathwa njengenkosi.
Nakuba esemncane, kodwa u-Emerson ungumholi wemvelo. Leli qiniso aliziwa kwabaningi. Uyamangalisa, udala, uyazethemba, unzima futhi unzima kakhulu ukumelana naye. U-Emerson uyakwazi ukufeza noma yini abayifunayo kunoma iyiphi indawo yokuphila abazinikele kuyo. Kukhona amandla akhethekile kuye "Inkosi yasehlathini" isimo.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Kudlalwa eceleni kukaNeymar
Yebo, njengoba kushiwo ngaphambili, u-Emerson wazalelwa eSantos, Sau Paulo, futhi wajoyina intsha yaseSantos ehlelwe ku-2009. Ingabe bewazi? ... Wachitha iminyaka eyisithupha ngeqembu futhi wadlala eceleni Neymar ngesikhathi sakhe lapho. Kusukela ngaleso sikhathi, u-Emerson wathatha into noma amabili evela eBrazil yase-Brazilian Golden Child.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
U-Emerson uvela emndenini ophezulu wezinga eliphezulu lomlando webhola lezinyawo. Eqinisweni, akayena kuphela umdlali webhola ngegama likaPalmieri. Kubonakala ibhola ligijima emndenini wakhe.
Umfowabo omdala ka-Emerson uGivanni owazalwa kwabazali abafanayo njengesikhathi sokubhala, okwamanje udlale i-Fluminense eBrazil njengeNombolo 6. Usebenza futhi njengengemuva kwesobunxele futhi uye wazama ukubonakala cishe kwe-100 neqembu laseBrazil.
U-Giovani ufaniswe ngaphezu kweminyaka emihlanu ubudala kunomfowabo omncane.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Isitayela Sakhe
U-Emmer ungumdlali webhola lezinyawo ezihlukahlukene kakhulu. Angakwazi ukudlala noma yizikhundla ezingakwesobunxele noma ezise-left-wing futhi ugcwalise ngisho nangemuva ngesikhathi sakhe e-Roma.
U-Emerson uthanda ukuqhubekela phambili ngisho nangokuthi ungumvikeli. Uyaziwa ngokuqhubeka nokushaya umuntu wakhe ohlukile. Lokhu kwembula ijubane lakhe elihle kakhulu, ibhalansi kanye namakhono afanayo okuqhubela phambili ohlelweni.
Naphezu kokuma ku-5ft 9in, akesabi ukusebenzisa uhlaka lwakhe ukuze kuzuze. U-Emerson uyakwazi ukudala izinqwaba ezinhlangothini lwakhe ngobuqili bakhe.
Ngakolunye uhlangothi lwensimu, u-Emer ulungile nakwezinye izimo ngenxa yezinyathelo zakhe ezimkhipha ezimweni ezikhohlisayo. Ngaphambi kokuza e-Chelsea, izibalo zakhe zokuzivikela ezihambisana kahle neSerie A.
U-Emerson Palmieri Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi wamazwe omhlaba
U-Emerson umele iBrazil ngezinga elingaphansi kwe-17 phakathi ne-2011 South American Under-17 Football Championship nangesikhathi seNdebe yoMhlaba ye-2011 FIFA U-17. Wayengumdlali ongenamanga ngesikhathi zombili zomqhudelwano, efaka umgomo wokulwa neChile ngo-16 March 2011.
NgoMashi 2017, ngemuva kokuba eseduzane nokuthola ilungelo lokuba yisakhamuzi sase-Italy, kubikwa ukuthi u-Emerson ulandelwa umqeqeshi wase-Italy uGian Piero Ventura ngenhloso yokushintsha ukuzinikela kwakhe e-Italy. Iphupha ishintshi yafika ngosuku lwe-29th ka-Mashi 2017.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Emerson Palmieri yokuBantwana kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.